Ganacsade xalay lagu dilay degaanka Ceelasha biyaha iyo ciidamada dowlada oo dad ka xirxiray deg. Wadajir
Kooxo bastoolado ku hubeysan ayaa la sheegay iney xalay degaanka Ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho ku dileen nin ganacsade ah oo magaciisa lagu sheegay Xasan Saciid.
Goob joogayaal ayaa sheegaya in marxuumka oo goob ganacsi ku lahaa meel ku dhow saldhig ciidanka dowlada degaankaasi ku leeyihiin ay wadada u galeen kooxaha dilay xili uu ka yimid goobtiisa ganacsiga kuna sii jeeday hoygiisa oo isla degaankaas ku yaala.
Kooxaha dilka geystay ayaa baxsaday iyadoo ciidamada dowlada oo sida looga bartay daqiiqado ka dib goobta gaarayna aysan ku guuleysan iney soo qabtaan.
Si rasmi ah looma oga sababta loo dilay ganacsadahan iyo cida ka dambeysa hase ahaatee warar ay isla dhexmarayaan dadka degaankaas ayaa sheegaya in ninkan loo dilay sababo la xiriira ciidamada dowlada oo wax ka iibsan jiray goobtiisa ganacsiga.
Dhinaca kale, ciidamada nabad sugida dowlada Somalia ayaa xalay howlgal gaar ah ka sameeyey guryo ku yaala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, iyagoo ka soo xirxiray dad gaaraya shan ruux oo ka mid ahaa dadkii guryahaas degenaa.
Saraakiisha ciidanka dowlada ayaa sheegaya in dadka ay howlgalkan ku soo qabqabteen lagu tuhunsan yahay iney ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab, xiritaankooduna uu yimid ka dib markii ay dadka degaanka ka heleen xog iyaga ku saabsan, waxayna xuseen iney baaritaano ku sameyn doonaan qofkii dambi lagu waayana xoriyadiisa loo celin doono.